Taurus uye Sagittarius kuenderana: Hushamwari, Rudo & Bonde - Zodiac Zviratidzo
Sagittarius uye Taurus kuenderana: Hushamwari, Rudo & Bonde
Vanhu vazhinji vanopokana nesimba reTaurus neSagittarius kuenderana. Uyu mutambo we rudo unowana ingangoita makumi mashanu nemakumi mashanu mukana wekuti ubudirire. Vamwe veTaureans neSagittarians vane kutsungirira kwekuita kuti rudo rushande. Vamwe vanorega rudo rusati rwawana mukana wekutumbuka!
Kana vaviri ava vakagara pamwe kwenguva yakareba zvakakwana, Taurus inobatsira Sagittarius pasi. Izvo zvichave nyore paSagittarius kuzvidzikamisa pachavo neTaurean yakatsiga padivi pavo. Taurus 'inoshanda hunhu muenzaniso weSagittarius. Iko kuratidzira kwemaitiro ekuvandudza midzi. Nheyo yakasimba ndiyo Sagittarius inoda kuti uchengetedze mupfungwa.
Sagittarius inowanzotora njodzi, asi kazhinji inomhara pamakumbo avo pavanodaro. Vanogona kudzidzisa Taurus nezve 'njodzi-kutora njodzi.' Izvo zvinobatsira Taurus kuve yakanyanya kuchinjika uye yakatowanda kuvhurika kune kunakidzwa.
Taurus neSagittarius vane zvakaenzana zvakaenzana kuti vagadzikane nemumwe. Ivo vane misiyano yakakwana yekuchengetedza hukama hwehukama hunyengere. Dash yekufungidzira uye kubata kwechakavanzika kunotsanangura iyo Taurus neSagittarius mubatanidzwa.
Ivo vaviri vane tsika dzakafanana uye vanobata kufarira kurera mhuri mune ramangwana. Ivo zvakare vanonzwa kudyisa pfungwa chinhu chakanyanya kukoshesa. Taurus naSagittarius vanosimudzira kudzidza kwakakwirira sezvo vari vaviri vekusingaperi vazivi! Vanodaidzira kushamisika kweSocrates pamwe chete, 'Tinoziva kuti hapana chatinoziva!'
Sagittarius uye Taurus Tafura yezviri Mukati
Sagittarius uye Taurus kuenderana
Sagittarius uye Taurus Rudo
Sagittarius uye Taurus Bonde
Taurus Murume uye Sagittarius Mukadzi Kuenderana
Taurus Mukadzi uye Gemini Man Kuenderana
Sagittarius uye Taurus Vanoda Match Kuputira-Kumusoro
A Taurus neSagittarius rudo mutambo unomutsa tsiye! 'Kusiyana' pasi-kunosimbisa mutsauko uripo pakati peaya masiyano nyeredzi. Zvakafanana nekuunza nzungu ruomba nemayonnaise uye mhere, 'Inonaka!' (Kumbira ruregerero pamberi peiyo kune vakawanda vari zana vanobvuma!)
Dema nechena. Husiku nemasikati. Oscar Madison naFelix Unger. Taurus uye Sagittarius. Idzo mbiri dzekupedzisira dzakapesana. Asi, haugone kuva neimwe isina imwe. Neimwe nzira, anopikisa masimba anozadzikisa kana kupedzerana.
Funga iwe; kubvumirana kunoti nzungu ruomba uye mayonnaise pamwechete zvinonaka zvinotyisa! Asi, zvinopesana zvinowanzo kukwezva muhukama zvichipa izvo zviri muhukama zvinotarisa pane simba reumwe neumwe. Sonam Kapoor anonongedza zvakanaka kukwezva kwevanopikisa:
Zvinopesana zvinowanzo gadzira yakanyanya chemistry. Kune mikana yakawanda ye fireworks apo vanhu vakasiyana vari pamwechete kupfuura hunhu hwakafanana. '
Mubatanidzwa pakati peTaurus neSagittarius unogona kushanda kana duo iri rakagadzirira kusvetuka nepakati kuti riite kuti riitike. Kupesana kwehunhu hunhu huchaita kuti vaviri ava vatarisana nemabasa akasiyana muhukama. Taurus inokodzera kuve iye anotarisira mamiriro epamba. Vanoda Sagittarius vanogona kunge vari kunze uye nezvekutarisa kuunza kumba bhekoni. Mauto anopikisa achiri kugadzira yakanaka nhanho mumutambo weTaurus-Sagittarius.
Ukama hweTaurus neSagittarius hune chimiro chakatsiga. Simba rinomuka apo vaviri vacho vanovakira hukama hwavo pane kuvimba. Taurus inoda kutendeseka kubva kune mumwe wavo. Mudiwa wavo anofanira kuvimbika kana kutarisana nehasha dzinotyisa dzenzombe inopenga!
Sagittarius anosarudza kutaura chokwadi pane kutaura nhema. Zvinonzwa kusanzwisisika kana vakaedza kuvanza chimwe chinhu. Taurus inoda shamwari yechokwadi, uye Sagittarius haanyepe, saka ivo vakakwana pamwe chete.
Taurus uye Sagittarius zvakare vanokurudzirana padanho rehungwaru. Chipo chavo chegab chinoita kuti iyo Taurus-Sagittarius combo igone kubatana. Ivo vachakurukura zvese kubva kumatongerwo enyika kusvika kuchitendero, uye uzivi kusvika kuHollywood makuhwa! Mapato ese ari maviri anowana mumwe nemumwe aine njere. Mapato ese ari maviri anowana huchenjeri hwepamusoro uye hunodakadza.
Taurus inoda kudhiraivha kune mumwe wavo, saka havafanirwe kunetseka nezve Sagittarius vane ziso rinotenderera. Asi, kana Taurus ikatsvedza mukudonha, vangangotora mumwe wavo seasina basa. Sagittarius inova isina kugadzikana. Sagittarius haafarire kunyepa, asi ivo havafarire mumwe wavo achivaregeredza futi. Vachave vakatendeseka nezve manzwiro avo. Sagittarius pane kudimbura zvisungo uye kufamba-famba ipapo wosazadziswa muhukama neTaurus. Rudo runongosimba sekuwanda kwerudo rwavanoda kuratidza.
Taurus neSagittarius vane mukana wekupona kana vakava shamwari, zvino vadikani. Hwaro muhukama hunopa hwaro hwehukama. Iyo zvakare inononoka roll yehukama. Zvakajairika kuti hukama huputike nekukurumidza. Chimwe chiitiko chakajairika kuona Taurus neSagittarius vachipedzisira vari mune 'shamwari dzine mabhenefiti' mamiriro chete.
Iyo Taurus neSagittarius rudo mutambo uchafanirwa kurega kuenda kune zvekuita zvepabonde. Ivo zvakare vanofanirwa kuwana maonero matsva ekuti ivo vanoona sei mumwe wavo kana kuda kuri kupisa mumba yekurara. Kana vaviri vacho vakunda zvipingamupinyi zvekudanana, ndipo pavanozorara. Zvepabonde muTaurus-Sagittarius combo inoenda kubva kushoma kusvika kune dynamite!
Sagittarius anoona Taurus seyakarara zvakare, isina basa, uye simbe. Inogona kunge iri Taurus 'yakasarudzika hunhu ichikonzera Sagittarius kuti vafunge zvisizvo. Taurus 'chaiyo lenzi zvakare askew. Ivo vanoona Sagittarius semwana asingagumi wechidiki asingambodi kukura kana kuchembera. Ivo vanofunga kuti Sagittarius ane kwakakosha kushomeka kwekukura. Pasina nzira yakakura yekuita bonde, Taurus inodzimwa uye kurira kunze!
Nemafungiro eTaurus neSagittarius kure nekure uye kure nechokwadi, zvakaoma kuvaona sevanoda. Asi, pane zvimwe hunhu hunhu hune izvo zvinounza pamwechete. Vaviri vanonakidzwa nemuitiro wepabonde uye kufara kwakanyanya kwavanogona kuwana. Mapato ese ari maviri mumubatanidzwa uyu anofarirawo kuratidza rudo rwavo kuburikidza nekubata panyama.
Anodikamwa kupfuura mazwi, nyika inotonga yaTaurus ndiVenus: Iye Rudo Mwarikadzi iye pachake! Jupiter ipuraneti yekukura, kuwedzera uye simba rekufara-go-rombo. Inobata pamusoro peSagittarius. Nekuda kwehukama hwepasi, Taurus neSagittarius vanogona kuwana kuzadzikiswa kwepabonde pamwechete. Ivo vanofanirwa kusvika pachiito nenzira inonakidza uye nerudo.
Kana iri pakati pemashiti, Taurus inoda kunzwa yakasununguka uye isina kudzivirirwa. Sagittarius inonyanya kugutsikana kana mamiriro ari akareruka uye achifara. Vaviri hunhu vanozoedza, vachipa kune 'rakachengeteka izwi' rekushandisa! Nenzira iyi mumwe nemumwe anovimbisa kuti mumwe haayambuki miganhu panguva yekuyedza!
Sagittarius uye Taurus Kutaurirana
Iyi duo inogona kudzinga maawa ekukurukura. Inoitira kutyisa kweTaurus neSagittarius kuenderana. Taurus inozununguka pamusoro pezvese zvinhu zvavanowana kunakidzwa kunoonekwa. Sagittarius anoita zvakafanana mukudzoka. Zvinoita sekunge vapedzisira vawana mumwe munhu wekugovana runako rwese rwavanosangana narwo munyika. Zvavanofarira muzvinhu zvinoyevedza vanovhara mukaha pakati pavo. Iri gwanza rinobva mukusiyana kwavo kwehunhu.
Asi kunyangwe kutaurirana pakati pehunhu huviri hunopesana hakusi kukanganisa. Kana ivo vachizviwana vasingawirirane, kupisa kunopedzisira kukakavara nekukurumidza. Taurus inoona Sagittarius seisingazive kunyangwe zvisiri zvechokwadi. Sagittarius anoona Taurus sediki-pfungwa. Taurus ndeyekufunga mumaizwi avo sarudzo pavanoisa Sagittarius munzvimbo yavo. Sagittarius pane kutsungirira kutambura kwepasirese kwenyika usati wateerera kune rimwe izwi rekushoropodza.
Taurus inyika bumpkin. Vanoda zvakasikwa uye zvakavanzika zvinopihwa nenyika. Sagittarius anoda kufamba nyika yese uye kusangana nevanhu vatsva. Hazvina kumboita senge vaviri vaviri vakasarudzika vanosangana pakati. Kana vakafunga kukanganisa, kutaurirana kusimudzira kunoshamisa.
Sagittarius uye Taurus Kurwisana
Mari ndiyo imwe yemakakatanwa makuru muhukama hweTaurus neSagittarius. Taurus inoda zvachose midzi kuti unzwe wakachengeteka kubva padyo tyisidziro yeshanduko. Sagittarius inogamuchira shanduko Taurus inotya. Taurus inoda kuisa mari muaccount account. Sagittarius anotarisa mubhadharo wekukurumidza pamwe nemasheya asina kugadzikana.
Sagittarius iri kuenda uye Taurus inosarudza yakawanda nguva yekuzorora. Taurus 'hombe nyaya iri kutora pamusoro inertia. Inononoka, yakadzikama, uye yakamira yakamira: Ndiwo matanho matatu ekufamba Taurus anopika ne! Sagittarius yakagadzirira shanduko yekukasira mune chero mamiriro. Sei? Nekuti, maSagittarians anochinjika, anochinjika, uye anobvuma.
Taurus 'kuramba kushanduka uye Sagittarian impulsivity kukakavara kana uchitenga zvinhu. Taurus inotsvaga izvo zvakaedzwa uye zvechokwadi kana zvisingagumi zvinhu zvinovimbisa kusimba. Sagittarius inobatwa mune iyo nguva uye inowana mufaro mukutenga nekukurumidza. Ivo havafunge nezve hupenyu hurefu kana vachitenga chinhu. Chisingagumi chigadzirwa chemhando chinhu chisina basa. Kushaikwa kwekushandisa rusarura kuchave neTaurus ichikwenya kumeso kwavo zvechokwadi!
Kashoma kana Taurus neSagittarius vakasangana neziso-neziso panhau dzemari. Zvirinani kutora manejimendi asingasaruri pakati pekubatsira nesarudzo dzemari dzekunze. Kuwirirana uye kunyatso tarisa bhajeti chimwe chinhu icho vaviri ava vanofanirwa kukumbundira. Kuita izvi kunobatsira mukudzivirira nharo pamusoro pemari pasi pemugwagwa.
Sagittarius uye Taurus Polarity
Polarities inoenderana nezviratidzo zvezuva zvinokanganisa kuenderana kweTaurus neSagittarius. Polarities dzakadai masimba kana mafomu pasimba: Aya masimba ndiYin uye Yang. Simba rega rega rinoitisa hunhu mumaitiro emunhu uye nyeredzi chiratidzo chinowira pasi pesimba rayo.
Yin simba rechikadzi. Yang simba iri murume. Tsananguro dzechirume neechikadzi hadzisi dzevakadzi. Panzvimbo iyoyo, 'echikadzi' simba rinongoitwa, rinogamuchira, uye rinoziva. 'Masculine' simba isimba rinopikisa kana rehasha, rekusimbisa, uye rinoita basa.
Taurus inoenderana neechikadzi Yin simba. Sagittarius ane Yang kana masimba echirume. Zvingaite senge zvinounza zviratidzo pamwechete zvakasikwa kana imwe ichawedzera imwe. Kana polarities inokanganisa munhu wese ari muchiyero, Taurus neSagittarius vanobatana zvakanaka. Kana polarities ikamuka, matambudziko anomuka.
Pane imwe nguva Yin isingaenzaniswi, Taurus inozviramba, kufira kutenda, uye kungopenga-nehasha. Iyo polarization yeYin simba inoita Taurus kunze kwemarudzi. Ivo vanonetseka kubata mukompasi yavo yemukati kuti vatungamirirwe.
Iyo polarization yeYang simba inoshandura Sagittarius kuita anodheerera. Anopokana asi akavhurika kuti atarise pfungwa nyowani, Sagittarius anova anoshora. Panzvimbo pekurarama hupenyu hune chinangwa, polarization muSagittarius inoguma mukungovepo kwehupenyu.
Taurus mishonga Yin kusaenzana nekuwedzera kuvimba kwavo uye kuvhurika kana kunanga. Sagittarius mishonga yeYang kusaenzana nekuva vanonzwira tsitsi uye vanonzwisisa. Mapato ese ari maviri achada kushivirira pavanobvumirana Yin neYang mauto.
Sagittarius uye Taurus Zvinhu
Icho chimiro pakati pezviratidzo zvezodhiac chinokanganisa mafambiro anoita mapato. MuTaurus neSagittarius rudo mutambo, pane kurwa kuri kuenderera. Iyo nhambwe iri pakati peTaurus neSagittarius zviratidzo zvishanu zvakaparadzana. Iine zviratidzo zvishanu zvinoparadzanisa zviratidzo zviviri, zvinogadzira chimiro chequincunx.
Icho chimiro zvakare chiri 'chisina kubatana' chimiro. Ichi chimiro chinomuka kana zviratidzo zvoda kuita nemadhigirii zana nemakumi mashanu. Chinhu chinonzi quincunx chinoratidza kuti vaviri vacho vane dambudziko kuwirirana. Kusanzwisisana kunoitika nekuda kwekutaurirana nyaya. Ivo vanogovana akasiyana epashure pesvedzero uye vanopikisa polarities.
Nechekubatana kweTaurus neSagittarius kuve nechinhu chisina kubatana, pane zvinonetsa. Vaviri vachapedza hupenyu hwavo vachikanganisa, vachikotama, uye vachigara mumwe nemumwe. Kuenderera mberi redirection uye kutsausa zvakakosha, saka pane basa rakaoma riri kumberi.
Taurus naSagittarius vachave nezvikonzero zviviri zvakasiyana zvekuve muhukama. Taurus inotsvaga rudo uye kushamwaridzana. Sagittarius anoramba ari kunze kwekufunga kwechinangwa. Iyi mweya miviri yakasarudzika inogona kuda kana kuvengana. Kana rudo ruripo, vanozoshanda nesimba kushora mikana yavanosangana nayo. Kana vachizvidza mumwe nemumwe, pane zvishoma izvo zvinogona kuchengetedza hukama.
Sagittarius uye Taurus Elements
Chero chiratidzo chezodhiac chinoenderana nechinhu. Elemental pesvedzero inokanganisa kubudirira kweiyo Taurus uye Sagittarius hukama. Taurus inowira pasi pesimba reNyika chinhu. Moto ndicho chinhu chinokanganisa Sagittarius.
Pasi rinogona kutsigira chinhu chemoto pachinenge chichishandiswa senzvimbo yemoto kana nzvimbo painogona kupisa yakatsiga uye inodziya. Asi, simba rakawandisa repasi rinogona zvakare kudzimisa iwo iwo moto. Moto unodziisa pasi rinotonhorera, sezvinoita Zuva zuva rega rega. Asi, painopenga kunze kwekudzora, inogona kupisa ivhu nyoro zvakare.
Kana Taurus ichitsigira, vanoshanda senzvimbo nyoro yeSagittarius yekumhara pazvinenge zvichidikanwa. Kana Sagittarius achinzwira tsitsi, Taurus inokura ichitora yavo inodziya rudo.
Taurus inoda kuenderana kana iri muhukama neSagittarius. Pasina kuomarara, kusava nechokwadi kunotonga uye kuri kuratidza shanduko inoenderera, inotyisa. Sagittarius inoda rusununguko uye rusununguko. Kana Taurus ikava inonamira, ivo vanotyisidzira ku'pwanya 'mumwe wavo.
Taurus uye Sagittarius kuenderana kunochinja. Iyo Taurus Man uye Sagittarius Mukadzi anozivikanwa se 'Odd Couple' pakati peshamwari dzavo. Ivo vanosiyana munzira yavanotarisa nayo hupenyu, hunhu hwavo, uye zvavanoda kubva kuhukama. Nenzwisiso izere uye moyo murefu vaviri ava vane mukana wekuzviita.
Chii chinonzi murume weTaurus anoona muSagittarius Mukadzi pakutanga? Iye anodiwa, akangwara, uye anotuka munhu anoda hupenyu. Iyo inoshamisa pfungwa yekuseka uye kuda kwezvinhu zvakanaka zvinokwezva kwaari. Mukadzi weSagittarius ane tariro yekusingaperi, saka Taurus inoona zviri nyore kuzorora pamberi pake kana zvese zvanaka.
Mukadzi weSagittarius bhora resimba. Anogara achifamba uye anoda kufamba. Ari pane zvake zvakanaka paanotandara neshamwari uye nemhuri. Taurus inokoshesa manakiro ainoita kana achitaurirana nevanhu vaanoda. Iye anodawo chokwadi iye ari kuyedza uye kutamba mukati uye kunze kwemba yekurara.
Asi, iyo Taurus neSagittarius rudo mutambo hausi muhombe wekare ruva gadheni nguva dzese. Murume weTaurus anotambura zvakare nemamwe maitiro eSagittarius Mukadzi. Iye anowanzo kuve anokanganisa sezvo achifamba kubva pane chimwe chinhu achienda kune chimwe nekukurumidza. Kusazvibata kunoratidzika kunge kwake chiratidzo. Haasi kugara achitarisisa kune zvidiki zvidiki. Mukadzi weSagittarius akakodzera kukanganwa zvinhu zvakakosha zvikuru. Kukanganwa kwake uye kutarisa kwakawanda kune zvakawanda zvinogumbura zvinoshanda Taurus.
Sagittarians vane hunyanzvi, vane mweya, uye vanowanzoita kushushikana. Iye ane hunyanzvi hwepamusoro-soro hunyanzvi mukunyomba, saka akatogadzirira nehungwaru hungwaru. Asi, iye zvakare murwi akakodzera uyo anogara achifanira kuve neshoko rekupedzisira. Akaoma musoro Taurus haana hanya neSagittarius 'snide zvirevo.
Mukadzi weSagittarius anoona Taurus ichikwezva nekuti ane rudo uye ane rudo. Anoshuva kushamwaridzana uye Taurus haana dambudziko kugadzirisa zvaaida. Pakutanga, Taurus anokoshesa kutendeseka kwake uye kuvhurika. Asi pane musiyano pakati pekutaura chokwadi uye kutaura. Iye murume weTaurus haana kushivirira kwenguva iyo paanozoita snide kana yakaipa.
Murume weTaurus anoda zvekunze. Kuvhima, kubata hove, uye kukwira nemusango ndeimwe yemafaro aanofarira. Kadzika pamasikati evhiki chikamu chenguva yake yekuzorora zviitiko zverondedzero. Mukadzi weSagittarius anofarirawo kunze. Nekudaro, vaviri ava vanopedza nguva yakawanda vachigovana nezvakanaka mune zvakasikwa nyika. Iye anokoshesa hunhu uye hwakatsiga hunhu hwemurume wake. Asi, iye zvakare anoziva hapana kumudzikamisa kana hasha dzake dzamuka. Akavhara ndokuzviitira zvinhu zvake kusvika asvika pakufunga.
Taurus Mukadzi uye Sagittarius Man Kuenderana
Hukama hwaTaurus neSagittarius hunosiyana kubva pane chaiwo rudo. Vaviri ava vakafanana mune mashoma zviitiko. Ivo vanogona kuwana zvakafanana nzvimbo yekuvakira pamwechete pamwechete. Asi, kuti Taurus neSagittarius vanobata sei mutsauko uripakati pavo nyaya. Zvinoita kana kuputsa hukama.
Kana uchibatana neMukadzi weTaurus, iyo Sagittarius Man iri kutora nzombe nenyanga dzayo! Iye ari kufamba, kutaura zvinopesana ane hunhu hwakadzikama uye kunyemwerera kwakanaka. Ari pakarepo coy uye kumberi, asina mhosva uye ane ruzivo, classy uye anovhundutsa. Pakutanga, murume weSagittarius anowana iyo Taurus Mukadzi chinonakidza. Iye akangwara uye anonakidza. Chipo chake che gab chinoratidza kukwezva futi. Sagittarius anonakidzwa nekutaura mumaawa ehusiku.
cancer mukadzi uye virgo murume pabonde
Taurus ishamwari isingachinji uye inoshanda. Sagittarius anofunga kuti akafukidza mabhesi ese. Sei achifanira kunetseka nezvechinoshanda nepo Taurus iri kutotarisira zvinhu? Pakutanga, Taurus kushivirira nendege Sagittarius uyo anogara achifamba uye achitsvaga kunakidzwa. Asi, kutsamwa hakusi kure pachikwiriso. Zvese zvinotora ndezvekuti murume weSagittarius azunguze mureza mutsvuku uye ari kunanga akananga kwaari, nyanga kutanga!
Mukadzi weTaurus anoteerera uye makumi mapfumbamwe muzana yenguva yaanoratidzika kunge akagara. Izwi rekuti 'sedate' rinokwana Taurus nekukwana. Izvo zvese zviri nyore kwaari kuti ave mbatatisi-chip-kudya, soda-pop-kunwa-mubhedha-mbatatisi. Taurus uye Sagittarius kuenderana kunowedzera kana vaviri vaviri varipo vachiteerana.
Iyo Sagittarius Man anofanirwa kuchinjika pamwe nenguva yake uye zvinoda. Anowanzoda zvinhu nenzira yake. Mukadzi weTaurus anogovera iwo iwo maonero akafanana. Asi, anozove akaomesa musoro nezvazvo! Sagittarius inoda kuti mukadzi wake atore kanenge makumi mashanu muzana yenguva. Izvo zvichavandudza mashandiro avanoita kune mumwe nemumwe. Izvo zvakare zvichaita kuti anzwe seanobata izwi rake dzvene.
Iyo Taurus Mukadzi anofanirwa kuzorora zviri nyore kana zvasvika kwaari Sagittarius Man. Iye akavimbika uye akazvipira kumunhu waanoda. Taurus haigone kugara muhukama nemunhu asingazvipire. Iye anoda kuvimbika uye achafamba kubva kune mumwe munhu kana vakatsauka. Asi iye achiri asina zororo muhukama. Sei? Iye murume weSagittarius anonakidza uye anoita zvekutamba. Mukadzi weTaurus anowanzoita godo rine hasha. Hazvirevi kuti anowanzoda kubiridzira, asi ane chaanoda kuti munhu wese amude.
Iyo Taurus neSagittarius rudo mutambo hausi yakagadzirirwa kuti ibudirire. Asi, hazvireve kuti vaviri vacho havana mukana wekuchengeta kubatana kwerudo kuri kurarama. Kuita kuti rive rekupedzisira, vaviri ava vanofanirwa kupa hurefu hushamwari kupfura kutanga. Ivo vanogona kushandisa iyo nguva kuti vazivane saka hukama hwerudo hunogona kuve hunofungidzirwa. Munguva yehukama hwavo, ivo vanogona kutsvaga zvakafanana. Izvo zvavanowana pamwechete chinhu chavanogona kuvakira hukama pairi. Kuita izvi kunotendera kuti vaviri ava vawane chiteshi chakachengeteka cheyakajairika kuti vadzoke zvakare kana zvinhu zvikaoma pakati pavo.
Kubatana pakati peTaurus neSagittarius kune hunyoro. Asi, hazviite kuti vaviri ava vadanane. Nekuzvipira uye kutarisa kune ramangwana, vaviri ava vanogona kushora mikana yekusagona kwehukama. Izvo zvinoita kuti rudo rwugare pakati peTaurus neSagittarius avo vanoda kuti ishande.
Iwe unodisa kuziva nezve zvimwe zodiac zviratidzo? Kuenderana chinhu chakaomarara muhukama, asi zviratidzo zvenyeredzi zvinogona kushanda segwara rako. Mazuva ese Horoscope Astros ine zvese zvinoenderana ruzivo iwe rwaunoda. Tsvaga kuti zodiac zviratidzo zvinobatana sei izvozvi! Ruzivo irwo rwemahara uye pamunwe wako!
Verenga Zvese Nezve Iyo Taurus Zodiac Chiratidzo
Dzvanya kuti udzidze zvese nezve Taurus Hunhu, Hunhu, & Hunhu !
Kutsvaga rudo? Dzvanya kuti uverenge zvese nezve Taurus kuenderana !
Wana zvakadzama info nezve Taurus Munhu !
Zarura chakavanzika cheiyo Taurus Mukadzi !
Une Taurus Mwanasikana kana Mwanakomana? Dzvanya kuti uverenge zvese nezve Taurus Mwana !
Wana zvakadzama info nezve Sagittarius Murume !
Zarura chakavanzika cheiyo Sagittarius Mukadzi !
chinese gore rejongwe zvinoreva
scorpio murume uye pisces hadzi pamubhedha
capricorn murume nekenza mukadzi kuenderana